China Organic Ginger rụpụta na rụpụta | Nongchuanggang
Nkọwa ngwaahịa nke ginger: enwere gingerol dị okpukpu anọ ma ọ bụ ise na-atụle ginger organic na ginger, ọ bụ ezie na ọ dị nro, ọ na-atọ ezigbo ụtọ. Ọzọkwa, organic ginger dị obere na fiber, ya mere ọ na-atọ ụtọ na ume ọhụrụ karịa mgbe ginger.
Iri ụfọdụ ginger n’ụbọchị anwụ na-acha ọkụ n’ahụ mmadụ nwere ike inweta ọnọdụ ka mma nke ịnụ ụtọ, ọsụsọ, ịjụ oyi na ume ọhụrụ. Maka arụmọrụ ọkụ zuru oke, dị ka dizziness, palpitations, tightness chest, ọgbụgbọ na ọnọdụ ndị ọzọ nke onye ọrịa, ọ bụ nnukwu enyemaka ị drinkụ ụfọdụ ginger / mmiri. Rendan, bụ ọgwụ ọdịnala ndị China na-egbochi mgbochi oke okpomọkụ, nwere ginger, nke eji eme ka afọ sie ike, mee ka ụbụrụ nwee ume ma gbaa ume.
Ihe omumu sayensi achoputala na ginger nwere ike ime dika ogwu ogwu, karia salmonella. Mgbe ị na-ata ahụhụ site na okpomọkụ dị ọkụ, nri na-adịkarị mfe mmetọ nje, na uto na mmeputakwa ngwa ngwa, ọ dị mfe ịkpata nnukwu gastroenteritis, iri ụfọdụ ginger nwere ike inyere aka na mgbochi na njikwa ọrụ.
Iri ginger nwere mmetụta nke igbochi ọgbụgbọ na ịkwụsị ịgba agbọ. Ọ bụrụ na e nwere “mmegharị mmegharị” nke ụfọdụ egwuregwu na-akpata, iri ginger nwere ike ime ka ọ belata. Nnyocha egosiwo na ginger ntụ ntụ na mmegharị kpatara isi ọwụwa, dizziness, ọgbụgbọ, ọgbụgbọ na mgbaàmà ndị ọzọ nke ọnụego dị irè nke 90%, na nrụpụta nke ihe karịrị 4 awa. Ndị mmadụ na-eri ginger iji gbochie ọrịa ọrịa, oke osimiri, ma ọ bụ osisi Neiguan acupoint, nwere mmetụta pụtara ìhè, ya mere ọ nwere aha nke "ịgbọ agbọ ọgwụ ụlọ".
Dị iche iche Nwa na-eto eto
Ibu (n'arọ) 80g 100g 150g 200g 250g
Nọmba nlereanya 100g-300g
Aha ngwaahịa Fresh Bulk Organic Ginger ire na China
Nha 100g / 150g / 200g / 250g / 300g
Akuku Kacha ọhụrụ n'Ubi
Ngwugwu Plastic katọn
Mbukota 20kg / akpa, 10kg / ctn
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa 100g na elu 10kg / akpa, 20kg / akpa, 10kg / ctn
150g na elu 10kg / akpa, 20kg / akpa, 10kg / ctn
200g na elu 10kg / ctn, igbe 10kg / gaisu, igbe 30lbs / plastic
250g na elu 10kg / ctn, igbe 10kg / gaisu, igbe 30lbs / plastic
Nke gara aga: Ntụ ntụ
Osote: Oji ojii